मोबाइल/टिभी हेर्न दिने समय बालबालिकालाई कति ? - Baikalpikkhabar
मोबाइल/टिभी हेर्न दिने समय बालबालिकालाई कति ?
डा. प्रकृति भण्डारी
स्क्रीन टाइम भनेको के हो ?
उमेर अनुसारकाे स्क्रीन टाइम कति हुनु पर्छ ?
स्क्रीन टाइमको नियम कस्ताे हुनु पर्दछ ? कस्ताे सामाग्री हेर्ने, कुन समयमा हेर्ने यो सबैको नियम बनाइदिनु पर्दछ।
अनुचित ढंगको स्क्रीन टाइमको बेफाइदा के हो ?
यसको लत बसिसकेको भए लत कसरी छुटाउने ?
मङ्गलबार, २६ साउन, २०७८, दिउँसोको ०२:५४ बजे